Musimboti weFMBR Technology - JDL Global Environmental Protection, Inc.
FMBR ndicho chidimbu cheiyo facultative membrane bioreactor. FMBR inoshandisa hunhu microorganism kugadzira inzvimbo yekudzidzira uye kugadzira chikafu cheni, zvine hungwaru kuwana yakaderera organic sludge kubuda uye kuwirirana panguva imwe chete kwezvinhu zvinosvibisa. Nekuda kweiyo inoshanda yekuparadzanisa mhedzisiro yeiyo membrane, iyo yekuparadzanisa mhedzisiro iri nani kupfuura iya yechinyakare sedimentation tangi, iyo yakasviba marara yakajeka zvakanyanya, uye iyo yakamiswa nyaya uye turbidity yakanyanya kuderera.
Kufema kunogumira kwesero ndiyo nzira huru yekudzora sludge. Nekuda kweiyo yakakura biomass yevasungwa, yakareba SRT uye yakaderera DO mamiriro, ayo akasiyana nitrifiers, inoverengeka ammonia oxidizing zvipenyu (kusanganisira AOA, Anammox), uye denitrifying zvinogona kugarisana munzvimbo imwechete yekugona, uye hutachiona muhurongwa hwakazara neumwe neumwe kuita chikafu chehutachiona uye kubvisa C, N uye P panguva imwe chete.
● Kubvisa panguva imwe chete ye organic kabhoni, nitrogen uye phosphorus
● Pasina manyoro akasara sludge inoyerera
● Yakanakisa kuburitsa mhando
● Minimum kemikari yekuwedzera yekubvisa N & P
● Nguva pfupi yekuvaka
● Tsoka diki
● Kutenga mari shoma
● Deredza kusvibiswa kwekabhoni
● Zvoga uye zvisingatarisirwi
FMBR WWTP Kuvaka Mhando
Pasuru FMBR Midziyo WWTP
Iyo midziyo yakabatanidzwa zvakanyanya, uye basa revagari rinongoda kuvaka iyo prereatment, midziyo hwaro uye tangi remvura. Tsoka yacho idiki uye nguva yekuvaka ipfupi. Inokodzera nzvimbo dzinoyevedza, zvikoro, nzvimbo dzekutengesa, mahotera, migwagwa, kudzivirirwa kwekushatiswa kwemvura, kurapwa kwakadzika, nemiti yekurapa munzvimbo dzekugara, chirongwa chekukurumidzira, kukwidziridzwa kweWWTP.
Kongiri FMBR WWTP
Kuonekwa kwechirimwa kunoshamisira nediki tsoka, uye kunogona kuvakwa mune zvakasikwa WWTP, iyo isingakanganise kutaridzika kweguta. Mhando iyi yeFMBR WWTP inokodzera chirongwa chikuru cheMasipala WWTP.
FMBR Kurapa Mamiriro
Iyo yetsika yekurasa mvura tekinoroji ine akawanda maitiro ekurapa, saka inoda yakawanda matangi eiyo WWTPs, izvo zvinoita kuti WWTPs ive yakaoma chimiro ine hombe tsoka. Kunyangwe yeiyo diki maWWTP, inodawo matangi mazhinji, zvinozotungamira kune yakasarudzika mutengo wekuvaka. Iyi ndiyo inonzi "Scale Effect". Panguva imwecheteyo, maitiro echinyakare ekurapa mvura yemarara achaburitsa sludge yakawanda, uye hwema hwacho hunorema, zvinoreva kuti maWWTP anogona kuvakwa padyo nenzvimbo yekugara. Iyi ndiyo inonzi "Kwete Muvazhe Rangu" dambudziko. Nematambudziko maviri aya, echinyakare WWTPs anowanzo ari muhombe hombe uye kure nenzvimbo yekugara, saka hombe seseji sisitimu ine yakakwira mari inodiwa zvakare. Kuchave nekupindawo kukuru uye kupinda mukati meiyo sewer system, haingosvibise chete mvura yepasi pevhu, asi zvakare inoderedza kugona kwekurapa kweWWTPs. Sekureva kwezvimwe ongororo, yekudyarwa kwetsvina inotora kunosvika makumi masere muzana muzana yemvura yekurasa mvura.
Iyo tekinoroji yeFMBR, iyo inogadzirwa neJDL, inogona kudzora akawanda marapirwo ekushambadzira echinyakare tekinoroji kuita imwe chete FMRB link, uye iyo sisitimu yakanyatsoomeswa uye yakaenzana michina, saka tsoka yacho ichave diki uye basa rekuvaka riri nyore. Panguva imwecheteyo, kune mashoma akasara ehupenyu sludge isina kana hwema, saka inogona kuvakwa padyo nenzvimbo yekugara. Mukupedzisa, iyo tekinoroji yeFMBR yakanyatsokodzera iyo yakasarudzika nzira yekurapa, uye inoziva "Pa-saiti Unganidza, Rapa uye Reuse", izvo zvakare zvichaderedza kudyara mune tsvina system.
Iwo echinyakare WWTPs anowanzo gamuchira kongiri mamiriro matangi. Rudzi urwu rweWWTPs runotora tsoka huru ine dhizaini yakaoma yekudyara uye hwema hunorema, uye chimiro hachizi. Nekudaro, nekushandisa tekinoroji yeFMBR ine maficha senge akareruka maitiro, hapana hwema uye mashoma akasara ehupenyu sludge, JDL inogona kuvaka chirimwa mu "kurapwa system pasi pevhu nekupaka pamusoro pevhu" ecological WWTP nekurapa kwemvura yakasviba uye kushandisa zvekare, izvo zvisingagone chete kuchengetedza tsoka, asi zvakare ipa iyo ecological girini nzvimbo yekugara yakapoterera. Pfungwa yeFMBR yezvakatipoteredza WWTP inopa mhinduro nyowani uye zano rekutsvaga kuchengetedza uye kumisikidza, uye nharaunda inoshamwaridzika WWTP.